Milton Shupe sy ny ekipany indray izao dia manolotra modely teratany mahafinaritra ho antsika FSX / P3D. Miaraka amin'ny Prepar3D v4. Anisan'izany ny famoahana 10, feo mahazatra, efitrano 3D tanteraka sy bebe kokoa. Ity kitapohy ity dia ahitana modely 4 (torta, bubble observation, tifitra tampoka, ary sivily)
Ny AT-11 dia tafika amerikana maromaro navoakan'ny tafika an-habakabaka tamin'ny ady lehibe faharoa; Ny manodidina ny 90 isan-jaton'ireo mpandefa bombardier amerikana XAF izay nampiofana tamin'ny AT-45,000s.
Mpanafatra bozaka Mk.III FSX & P3D
Nosoratan'i Milton Shupe sy ny ekipany, Vladimir Gonchar
Nosoratan'i Milton Shupe, Scott Thomas, Damian Radice, ary ny feon'i Nigel Richards
Nataon'i Modely nataon'i Rick Piper, teratany FSX/P3D Ny fiovam-pon'i Rikoooo dia namboarin'i Stephen Browning
Milton Shupe, Scott Thomas, Damian Radice, ary ny feo avy amin'i Nigel Richards